समाचार Archives - JHAPA POST.COM
काठमाडौं – निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमलाई नदिइने भएको छ। निगमले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा प्रतिस्पर्धामात्रै दिने भएको हो। प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको जिम्मा दिन प्रतिस्पर्धा गराउन टेन्डर आह्वानको तयारी थालेको छ। प्राधिकरण अन्तर्गतको गौरवको आयोजना कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले यही डिसेम्बर महिनाभित्र टेन्डर आह्वान गर्दैछ। ‘टेन्डर आह्वानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ नाम नबताउने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘यही डिसेम्बर महिनाभित्र टेन्डर आह्वान हुन्छ।’ प्रतिस्पर्धा नगराई निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिँदा प्राधिकरणलाई घाटा हुने देखिएपछि टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणको विमानस्
भैरहवा : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम तिव्र रुपमा भइरहेको छ। विमानस्थलको ५८ प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलको धावनमार्गको काम पनि तिव्र गतिमा भइरहेको छ। चार तहपछि धावनमार्ग तयार हुन्छ। एउटा तह सम्पन्न गर्नका लागि १५ देखि १८ दिन लाग्ने आयोजनाको भनाइ छ। धावनमार्गको पहिलो तहको ५० प्रतिशत (१५ सय मिटर) काम भने सम्पन्न भइसकेको छ। धावनमार्ग ३ हजार मिटरको छ। मौसमका कारण बाधा उत्पन्न नभए दुई महिना बढीमा धावनमार्ग सम्पन्न हुने विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो तहको काम सम्पन्न गर्न लाग्ने भन्दा आधा समयमै धावनमार्ग तयार हुनेछ। ठेकेदारले एउटा पेभर (पिच गर्ने मेसिन) थप गरेर पिच गर्ने भएकोले धावनमार्ग छिट्टै तयार हुने उनको भनाइ छ।त्यस्तै ठेकेदारले असाफल्ट मेसिन पनि थप गरेको छ। हालसम्म एउ
मलेसियामा अहिले संगठित रुपले नेपाली कामदार ठगिन थालेका छन् । मलेसियामा गर्दागर्दैको काम छुटाएर कामदारलाई अबैधानिक बनाइदिने, अबैधानिक भएपछि कामदारलाई अन्त काम लगाइदिने, अनि मलेयिसाको प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर आफैंले अबैधानिक बनाइसकेको कामदारलाई पक्राउ गराइदिने र पक्राउ परेको कामदारलाई नेपाल पठाउने नाममा नेपाली दूतावासको नाम प्रयोग गरी कामदारको परिवारलाई नेपालमा ठग्ने संगठित धन्दा गर्ने गिरोहको फन्दामा अहिलेसम्म दर्जनभन्दा धेरै परिवार परिसकेका छन् ।यसरी फन्दामा परेका चार परिवारको कथाव्यथाको श्रृंखला हो ‘मलेसियामा कामदार फसाउँदै नेपालमा परिवार लुट्दै’। यो श्रृंखलामा आज प्रस्तुत छ बाँकेका सिरज अली गाधीकाे कथा । काठमाडौं – च्यातिंदै गएपछि पुरानो पाइन्ट काटेर बनाएको र प्लाष्टिकको डोरीले कम्मरमा अड्काएको पुरानो, मैलो र खुइलिएको जिन्सको हाफपाइन्ट देखाउँदै बाँकेका सिरज अलीले भन्नुभयो ‘यही पाइन्टक
एजेन्सी– हामीहरु सबैलाई थाहानै छ कि संसारका हरेक महिला तथा पुरुषहरु जीवनमा एकपटक बैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने गर्छन। यसरी बैवाहिक सम्बन्धमा रहन इछुक महिला तथा पुरुषको उमेरमा केही वर्षको फरक हुनु सामान्य रुपमा हेर्ने गरिन्छ। तर कहिलेकाँही यस्तो अचम्मलाग्दो जोडी समेत देख्न सकिन्छ कि जहाँ महिला र पुरुष बीचको उमेरमा निकै अन्तरल भएको हुन्छ। कोहीबेला महिला र पुरुषबीच मन मिलेको अवस्थामा उमेरको ख्याल नराख्दा समेत यस्तो अवस्था आउन सक्छ। केही पुरुषहरु आफ्ना छोरि समान देखिने युवतीहरुसँग बिहे गर्ने गर्छन जुन धेरै अचम्मलाग्दो हुने गर्छ। आजभोलि सामाजिक संजालमा एक जोडीको बिवाहको तस्बिर भाइरल भईरहेको छ। एक वृद्ध व्यक्तिले युवतीसंग बिहे गरेका तस्बिर विभिन्न मिडिया मार्फत भाइरल भएपछि संसारभरका मान्छेहरुले अचम्मित मान्दै उक्त यूवतीप्रति दया देखाएका छन्। तस्बिर हेर्दा तपाईहरु जो कोहिले अचम्मित मान्न सक्नुह
प्रत्येक दिन बिहान ४ बजे घडीको ‘टिरिङ–टिरिङ’ आवाजले गंगालाई निद्राबाट ब्यूँझाउँछ। उनी हतारहतार उठ्छिन्, र नानीबाबुहरुलाई खाजा तयार गर्नतिर लाग्छिन्। ७ बजेभित्र बिहानको खाना तयार गरिसक्नुपर्छ उनले। सारा घरधन्दा बिहान ७ बज्न नपाउँदै सकेर उनी गाडीको चाबी लिएर बाहिर निस्कन्छिन्। अघिल्लो दिन बेलुकै तयार पारेर राखेका खुद्रा सामान बिक्रीका लागि गाडी लिएर कुश्माबजार निस्केकी उनी ९ बजे स्थानीय व्यापार सकेर घर फर्किन्छिन् र आफ्ना नानीबाबुहरुलाई खाना खुवाएर विद्यालय पठाउन भ्याउँछिन्।फेरि ११ बजेसम्म खानपिन लगायतका काम सकेर उनी बेलुका ४ बजेसम्मका लागि घरबाट निस्किन्छिन्। गाडी लिएर छिमेकी बजारहरु पातिचौर, डिमुवा, नयाँपुल, बागलुङ, मिलनचोक र कहिलेकाहीँ बेनीसम्म सामान बिक्री गर्न पुग्छिन् उनी। पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वडा नं. ५ बाजुङ निवासी गंगा सुवेदीको दैनिकी हो यो। उनले यसरी कार्गो भ्यानको स्ट
नेपाल फर्किदा विमानस्थलमा नै श्रृखंलाका आँखा रसाए, पहिलो प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै यसो भनिन् (भिडियो)
मिस नेपाल श्रृखंला खतिवडा नेपाल फर्किएकी छन् । उनि चीनमा भएको विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर नेपाल फर्किएकी हुन् । उनी केहिबेर अगाडीमात्रै नेपाल आइपुगेकी छन् । रातको समय भएपनि उनलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा उनका शुभचिन्तकको भिड लागेको थियो । मिस नेपाल बन्दै उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन चीन पुगेकी थिइन् । प्रतियोगिताको अवधिभर उनको चर्चाले विश्वभर स्थान पाएको थियो । नेपालका मात्रै नभएर उनको पक्षमा विश्वभर माहोल बनेको थियो । विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा उनी उत्कृष्ट १२ सम्म पुग्न सफल भएकी थिइन् । उनी थाइल्याण्डकी सुन्दरीसँग पछाडी पर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएकी हुन् । अब नेपालमा रहेर आफ्नो बाँकी काम पुरा गर्ने उनले विमान स्थलमा बताएकी छन् ।
कैलाली / कैलालीको दुर्गम गाउँमा एक महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई स्थानीयबासिले कालोमसो दलेर सजाय दिएका छ्न् । जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–१, दक्षिण मझरका टुक्की भनेर चिनीने कृष्ण चौधरीलाई सार्वजनिक स्थानमा कालोमसो र जुत्ताको माला लगाएर परिक्रमा गराएका हुन्। चौधरीले सोही गाउँकी एक महिलालाई २३ गते राति महिलालाई बलात्कार गर्ने प्रयास गर्दा उनी भाग्न सफल भएकी थिइन्। महिलाले प्रतिकार गर्दा चौधरीले उनलाई कुटपीट समेत गरेको पीडितले बताएकी छिन्। उनी चिच्याएपछि गाउँलेले थाहा पाएपछि चौधरीलाई पक्राउ गरेका थिए। भारतमा रोजगारी गर्दै आएको चौधरीलाई चैत २४ गते गाउँमा सार्वजनिकस्थलमा कालोमसो दल्नुका साथै दुई लाख रुपैयाँ समेत जरिवाना गरिएको छ। यस विषयमा प्रहरीले औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी नआएको बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरिक्षक वीरबहादुर बुढा मगरले भने, ‘महिला माथि
श्रीमान १७ वर्षभयो दुवईमा हराएको, साउदी पुगेको छोराले पनि फोन गरेन !
खोटाङको पाथेकाकी देवी गुरुङका श्रीमान सन्जिव राई वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवई पुगेको १७ वर्ष भयो । छोरो विशाल पनि झण्डै साढेतीन वर्षदेखि साउदीमा छन् । तर विदेशमा भएका श्रीमान र छोराले देवीलाई न फोन गरेका छन् न त खर्चबर्चनै पठाएका छन् । छोराको बारेमा अरुले सुनाएपनि श्रीमानको भने कुनै अत्तोपत्तो छैन । छोरो विशालले पहिले फोन गर्थे । तर २०७२ सलामा भुकम्प गएकाबेला फोन गरेपछि फोन गर्न छाडेका छन् । देवीले अरुमार्फत नै छोराको बारेमा सामान्य जानकारी पाउनु भएको छ । तर श्रीमानको बारेमा भने जानकारी दिने मान्छे समेत छैनन् । साउदीमा दुई वर्ष बसेर फर्किएपछि श्रीमान सन्जिव दुवई जानु भएको थियो । सन्जिवले घर छाड्दा दुई वर्षकी छोरी मन्जिला अहिले कक्षा १२ मा पढ्दैछिन् । मन्जिला खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलमा बसेर पढ्छिन् । देवी भने घरमा एक्लै हुनुहुन्छ । २०७१ सालको जेठ ३ गते साउदी उडेका छोराले न खर्च पठाए
खुशिको खबर: नेपाली युवाले बनाए हेलिकोप्टर ४० मिनेट आकाशमा उड्यो ! सम्मान सरूप १ शेयर गर्नुहोस !
काठमाडौं, देशकै पिछडिएको र लोपोन्मुख जातिको सूचिमा रहेको चेपाङ समुदायका एक युवा आफैले बनाएको हेलिकोप्टरमा ४० मिनेटसम्म आकाशमा उडान भर्न सफल भएका छन् । विगत दुई महिनादेखि हेलिकोप्टर बनाउन सक्रिय २३ वर्षिय सरोज चेपाङले आइतवार विहान गरेको तेस्रो परिक्षणमा ४० मिनेटसम्म आकाशमा सफल उडान भर्दै सकुशल अवतरण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद गोविन्द चेपाङको उपस्थितिमा चेपाङ समुदायका युवा बैज्ञानिक सरोजले आइतवार विहान ८ः०० बजे परिक्षण उडान गर्दै ४० मिनेटसम्म आकाशमा हेलिकोप्टर उडाउन सफल भएको एमालेका सांसद गोविन्द चेपाङले बताए । उनकै उपस्थितिमा हेलिकोप्टर उडाएको हो । सांसद गोविन्द चेपाङले दृष्टिन्यूजसँग भने, ‘सरोज भाइले शुक्रबार र शनिवारको दुई दिनको अथक मेहनतपछि आइतवारको परिक्षण सफल भएको छ । करिब ४० मिनेट हेलिकोप्टर आकाशमा उडेर सकुशल अवतरण गर्न सफल भयो ।’ राप्ती नदि तटस्थित बगरमा गरिएको परिक्षणमा सरो
म अपाङ्ग हुँ तर सेक्स मेरो पनि आवश्यकता हो’
फेरानक आमिदी /बीबीसी इरानमा करिब एक करोड मानिस कुनै न कुनै अपाङ्गताबाट ग्रस्त छन् । रुढीवादी देश इरानमा सेक्सजस्तो विषयमा कुरा गर्न वर्जित छ । यस्तोमा अपाङ्गता भएका महिलाको विषयमा सेक्सबारे सोच्न पनि सकिँदैन । उत्तरी इरानको एउटा सानो गाउँमा बस्ने ४१ वर्षकी अपाङ्गता भएकी महिला मितरा फराजदाहले आफ्नो अनुभव र निराशाबारे कुरा गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘म एक महिला हुँ । म एउटा यस्ती महिला हुँ जो ७५ प्रतिशत शारिरिक अपाङ्गताबाट ग्रस्त छु । हो, मैले प्रेमको अनुभव गरेकी छु । म सधैं भन्ने गर्छु कि जसले कहिले पनि प्रेमको अनुभव गरेका छैनन् वा प्रेममा परेका छैनन् उनीहरु खेतमा चराहरुलाई डराउनका लागि राखिने पुतलीजस्तै हुन् । ’ ११ वर्षको उमेरमा प्रेमः मितराका अनुसार उनी ११ वर्षको हुँदा आफ्ना एक छिमेकीका छोराका लागि विशेष भावना महसुस गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘यो भावनाको अर्थ मैले त्यतिबेला